Ukuphupha ngeePijama Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuphupha iipyjama. Iyintoni intsingiselo yamaphupha? Siza kujongana nesi sihloko kwaye sihlalutye ukutolikwa kwamaphupha ngokwembono yengqondo neyokomoya.
Iperi yePyjamas-Abanye bayazifuna ukuze batyibilike kwaye abanakulala ngaphandle kwabo. Kwabanye, oku kuthintele kwaye bakhetha ukulala ngaphandle kwayo. Wonke umntu kufuneka azenzele esi sigqibo.
Kodwa zinokuthetha ntoni ipijama njengomfuziselo wephupha? Xa utolika iphupha lakho, naka umxholo kunye neemvakalelo zakho. Kuba ezi zikwabonelela ngolwazi olubalulekileyo kutoliko lokulala.
1 Uphawu lwephupha «ipyjama» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Isimboli yokulala «iipijama» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ipyjama» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ipyjama» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu lwephupha «ipyjamas» lubhekisa kutoliko lwamaphupha ngokubanzi ukugcinwa kwemfihlo kunye nokusondelana kubomi bemihla ngemihla. Kwakhona, iphupha elo linokubonisa ukuba wenza okuncinci kakhulu ukufezekisa impumelelo yakho. Ukuba uqhubeka nokuziphatha, kuya kufuneka ulungiselele iingxaki zebhanki kwixa elizayo. Umphuphi ngoku unethuba lokutshintsha indlela aziphethe ngayo kwaye ke ukuthintela ukungabikho kwemali.
Ukunxiba iipyjama ephupheni kulumkisa umntu ophuphayo ukujonga amehlo ebomini babo. Bangena nakwimicimbi yakho yobuqu. Ke ngoko, kufuneka ulumke kwaye ulumke ebomini. Ukuba umphuphi ukhulula iipijama zakhe ephupheni, akananto ayifihlayo kubomi bakhe bemihla ngemihla. Kodwa kusafuneka ulumke ungatyhileli yonke into ngawe. Kuba kukho abantu abakungqongileyo abanokufuna ukukwenzakalisa.
Kunika umdla ukutolikwa kwephupha ukuba loluphi uhlobo lweepijama ozinxibayo xa ulele. Ukuba umphuphi ubona omnye umntu enxibe iipyjama ephupheni, unokuba nengxabano kwindawo yasekhaya.
Ukuba iipijama zixinene ebuthongweni, uziva uthintelwe okanye uthintelwe ebomini bakho ekuphuculweni kobuntu bakho.
Isimboli yokulala «iipijama» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwenkcazo yengqondo yephupha, lowo unxibe iipyjama ephupheni ufuna ukuba kubomi bakho ngaphandle kobunqunu. Ufuna ukukhusela isiqu sakho sangaphakathi kwabanye kwaye ungaziniki ngokupheleleyo kwabanye abantu.
Iipijama zinokubonwa njengophawu lokuphumla kunye nokuvuleka. Ukuba iphupha likwisigaba soxinzelelo ebomini, elo phupha linokubonisa umnqweno wokuphumla kunye nokuphumla.
Ukuba iphupha eli lijonga omnye umntu ekhulula iipijama zakhe ephupheni, oko kuthetha ukuba sesichengeni saloo mntu. Kuba ngokuzithandela wavula kwaye wambonisa zonke iinkalo kunye nobuntu bakhe. Umphuphi kufuneka awuxabise lo mqondiso kwaye awuphathe nya mekela.
Uphawu lwephupha «ipyjama» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya kutolika uphawu lwephupha "ipyjama" njengenxalenye ye ukukhuselwa ngokomoya.